चलचित्र Archives - Page 30 of 30 - Medianp.com
सलमानको विरुद्धमा अभिव्यक्तिदिएपछि सोना महापात्रलाई आयो ज्यान मार्ने धम्की
काठमाडौँ । बलिउड स्टार सलमान खानको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि बलिउडकी चर्चित गायिका सोना महापात्रालाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ । इमेल मार्फत सलमानका फ्यानले आफुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सोनाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीट मार्फत
ससुराको निधले पिडामा परेकी अभिनेत्री काजोललाई पर्यो फेरि अर्को समस्या
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:५२0
काठमाडौँ । केही दिन अगाडी बाबू वीरु देवगनको निधन भएपछि अजय देवगन र काजोलको परिवार शोकमा डुबेको छ । ससुरा बितेको केही दिन नबित्दै अभिनेत्री काजोलकी आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आएको खबर आएको छ । स्वासप्रस्वास सम्बन्धी
बलिउडका यी कलाकार, जाे कोख भाडामा लिएर बने आमाबूबा
काठमाडौँ । कोख भाडामा लिएर आमाबाबू बन्नुलाई सेरोगेसी भन्ने गरिन्छ । यस्तै बलिउडमा केही कलाकारहरु विवाह नगरी बाबू आमा बनेका छन् । आज हामी तपाईहरुलाई बलिउडका केही कलाकारको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । जो विवाह
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा डोजर लगाएपछि यसरी आक्रोसित भए कलाकार
काठमाडौँ । चर्चित हास्यकलाकार धुर्मुस सुन्तलीको नेतृत्वमा चितवनमा निर्माण हुन लागेको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालमा सुरक्षाको लागि बनाइएको घेराबारमा डोजर चलाइएपछि कलाकारहरु आक्रोसित भएका छन् । कलाकारिताको साथै समासेवमा रहेका धुर्मुस सुन्तलीले देश तथा विदेशमा रहेका
१० फोटोमा हेर्नुहोस बेहुली बन्दा यस्ती देखिइन चपली नायिका बिनिता बराल
काठमाडौँ । केही वर्ष अगाडी प्रर्दशन भएको फिल्म ‘चपली हाइट’ की अभिनेत्री बीनिता बराल विवाह बन्धनमा बाधिएकी छन् । केही समयदेखि अमेरिका बस्दै आएकी बीनिताले अमेरिका निवासी तिलक पौडेलसँग विवाह गरेकी हुन् । अमेरिकामा रहँदा तिलकलाई
‘बोल माया’ गीतबाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री अञ्जली ‘प्रेमगीत ३’ मा इन्ट्रि
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली सिने जगतमा राम्रो चर्चा पाएको चलचित्र ‘प्रेम गीत’ को तेस्रो सिरिज ‘प्रेम गीत ३’ मा ‘बोल माया’ गीतमा अभिनय गरेबापत चर्चित भएकी अभिनेत्री अञ्जली अधिकारीको अभिनय रहनेभएको छ । दशैको आसपासमा
फिल्म ‘केजीएफ’ को सिक्वेल बन्दै, फिल्ममा अभिनेत्री रबीना टन्डनको मुख्य भूमिका रहने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००९:०३0
काठमाडौँ । यश स्टार कन्नडन फिल्म ‘केजीएफ’ च्याप्टर १ को सिक्वेलमा अभिनेत्री रबीना टन्डन रहने बताइएको छ । ‘केजीएफ’ च्याप्टर १ को सिक्वेलको छायांकन भइरहेको फिल्मको पहिलो भाग सुपरडुपर राम्रो भएपछि मेकर्सले केजीएफ २ को
किन जोडियो अभिनेता सनी देवलसँग आफुभन्दा २० वर्ष कान्छी अभिनेत्रीको नाम ? आखिर के थियो कारण ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:५८0
काठमाडौँ । सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा ठूलै जित हात पारेका बलिउड अभिनेता सनी देओल समय समयमा निकै चर्चामा आउने गर्छन् । पंजाबको गुरदासपुर सीटमा बीजेपीको टिकटकमा चुनाव लडेका उनको यो पहिलो सफलता हो । चुनाव
बलिउडका यी ५ सेलिब्रेटी, जसले पहिलो पटक चुनाव जितेर बने सांसद
काठमाडौँ । भारतमा भएको लोकसभा चुनावमा बिजेपीेले उग्र मत ल्याई बिजयी भएपछि बलिउड सेलिब्रेटीहरुले सांसद पद जितेका छन् ।कयौँ पटक चुनावमा उत्रिदा पनि सफलता हात पार्न नसकेका सेलिब्रेटीहरुले यो पटक भने विजयीको साथ पाएका छन्